Geeriyoote Maxaa xigga!!!??(Qormo Kooban) ~ www.Ifiyahacilmiga.blogspot.com
Hooyga Barashada Information Tichnlogy-ga
Cashiro sameynta blog
Geeriyoote Maxaa xigga!!!??(Qormo Kooban)
12:58:00 AM Qormooyin No comments
Waa laguu meedhi, ka dibna maro cad ayaa lagugu kafni. Gurigaa lagaa saari markaasa god dhulka hoosti ah lagu galin. Dad badan ayaa maalintaa wax kasta faraha ka qaadi doona si ay guirga cusub kuugu dhisaan, shaqoyinkii ay hayeen maalinta u xidhi doona si ay aaska uuga qayb qaataan.
Dunidu kuu murugoon mayso. Ganacsiguna wuu sii socon doona. Shaqadii aad hayseena qof kale ayaa qaban. Alaabtaada waa lakala qaybsan ama la daadin. Maryaha kuwaad ugu jecleedna waa la kala qaadan ama lagu sadaqaysan haddii aan lakala boobin. Xoolaha aad lahaydna si xalaal ah ayaa xisaab xisaabsaneed lagu kala qaybsan. Adna Ilaahay ayaa kugu la xisaabtami meesha aad ka keentay iyo meesha aad ku bixisay.
Asxaabtaadu intay dhowr saacadood murugoodaan ayey noloshooda wadan doonan. Reerka aad baxdayna laga yaaba dhowr todobaad ka dib ay sidoodi hore iskaga noqdaan.
Sidaas ayey sheekadaada aduunyo ku xidhmaysa!!
Markaas ayey sheekada akhiro furmaysa!!
Amaani wax ku tari mayso, xana waxba ku yeeli mayso. Su’aasha is waydiin leh waxay tahay: Aakhiro maxaad u diyaarsatay?
Waa xaqiiqda u baahan in imika laga shaqeeyo. Waligaa laba iska ilaali: Salaada ood ku ciyaarto iyo maalka xaaranta ah. Dib isku waydii oo isla xisaabtan intaan lagula xisaabtamin. Haddii aad bar madow ku aragtid buugaaga waa inaad ka qoomamaysaa.
Fadlan gaadhsi cidii aad jeceshahay inay ka faaidaystaan!!
Wa Bilaahil Towfiiq!!
Xuquuqda waxa iska leh: faaido.com
Fursad muhiim ah
Kuso dhawaada Gacmo Furan
University of Somalia(Uniso)
Dhacdooyinka Layaabka dunida:Nin aan qubeysan ku dhawaad 60-Sano sheeko xiisa leh+Video
Inta aad ku nooshahay aduunyada waxaad maqleysa ama aadba la kulmeysa dhacdooyin ka yaabiya isla markaana Fajac kugu abuura hadaba aqr...
50 SUÁAL & JAWAABAHOODA OO KU SAABSAN DHIIGGA CAADADA EE DUMARKA KU DHACA & DAHARADOODA.
(WAA SU`AALO IYO JAWAABO) Waa kitaab af-Soomaali ah W.Q: Muxammad Mursal Muxammad إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله...
Barnamijka Lacag ka sameynta Internetka Part 1:Side lacag uga sameyn karta Internetka Adigoo Gurigada Jooga.
Barnamijka Lacag ka sameynta Internetka Part 1:Side lacag uga sameyn karta Internetka Adigoo Gurigada Jooga. Aqiyarey meel wa...
Ka faa'iideyso Websit Aad ka heli karto dhamaan Buugtii Manhajkii Hore ee Soomaliya
Asc Aqiyaarey ku soo dhawaada Hooy-ga waxbarashada maanta waxaan halkaan idiin kugu so Gudbinaya websit Somali ah kaasi oo aad ka heli ka...
Download Software :Halkan kala dag Softwareka lagu magacaabo Freemake Video Downloader muxuuse yahay Faa'iidada uu leeyahay sideese lo isticmaala (Cashir muhiim ah)
Download Software :Halkan kala dag Softwareka lagu magacaabo Freemake Video Downloader muxuuse yahay Faa'iidada uu leeyahay sideese l...
Ma doonesa Kitaabo iyo Qormooyin ka hadlaya Diinta Islaamka oo ku Qoran Afkeena Hooyo Hadey Jawaabtu Haa Tahay Halkan ayaad ka heleysa -->>Warbixinta Websitkaas oo kooban
Asc Kulanti Wanaagsan Aqiyaarey Meel walba oo aad joogtan manta waxaan halkaan idiin kugu so gudbinaya Websit Somali ah kaasi oo aad ka h...
Sidee lo Jabiya ama lo furaa hadii Mopilkada Sumsung-ka uu kaaga xirmo Password Lock Screen ama Password-ka Shaashada+Sawiro+Video+Qoraal( Xal Deg Deg ah)
Asc aqiyarey kuso dhawaada Hooyga Barashada Tichnlogyada Maanta waxaan halkaan idiin kugu so Gudbinaya qaabka aad u jabin kartit ama aad...
Daawo Video:Sidee lagu helaa Furaha Guusha Raac Arimahan so socdo si aad u noqoto Qof mar walba Guulesta
Daawo Video:Sidee lagu helaa Furaha Guusha Raac Arimahan so socdo si aad u noqoto Qof mar walba Guulesta . Asc kulanti wanaag...
Baro Sadax Qaab oo aad Mopile-kada Sumsung-ka Rest ama Format ugu Sameyn kartit (Sawiro+Qoraal)
Asc aqiyaarey kuso dhawaada Hooyga Barashada Computerka Maanta Haduu Eebe Subxanuhu Watacaala Idmo Waxaan idiin la wadaagi doona Cashir K...
Sida lo jabiyo Password-ka mobil-ka sumsung haduu kaaga xirmo ( Hab Fudud )
Daawo Cashir ku saabsan sida loo jabiyo hadii uu mopilka kaaga xirmo Password runtii cashirkaan in aan so diyariyo waxa igu kalifay marki...
Baro Sidee Loo sameeya Boor xayesiin Adiga oo isti...
Daawo Muxaadaro cinwaankedu yahay Waad sameyn kart...
Qurxi wajigaada Adigoon isticmaleyn Daawo Chemical...
Wax ka ogoow 10-ka websit Soomalida ugu caansan ee...
Daawo Taarikh Nololedka Sheikh Saciid Raage oo dha...
sida loo sameeyo simple application aqrinaayo qora...
5 Qodob oo hadaad isku aragto aad noloshaada horum...
Ka Faa'iidesyso Taarikh nololedka Mid kamid ah hal...
Daawo Muxaadaro ku saabsan Gabdhaha iyo wiilasha i...
Qiso :Aabe Saladan aad Maalin walba Tukaneyso miya...
5-Shan Qodob oo sababi kara Bur-burka ku yimaada X...
Qurux iyo Hurdo La'aan Meel ma isla galaan (Warbix...
Wax ka Baro Cuntooyinka Kordhiya Xasuusuta iyo Ga...
Qaababka la isaga Daweeyo Murugadda (Qormo kooban)...
Fursad Muhiim ah Ku hel interned High Speed ah Lac...
Kusoo dhawaada Muxaadaro Cinwaankedu yahay Hagaaji...
Daawo Sawirada Dabaal Dagi kooxda Leicester City ...
Sidee ku noqon karta Arday wanaagsan kaasi oo Guul...
Waxaa hubaal ah hadii aad qodobadan 4-ta ah Hir ga...
Daawo Video:Sidee lo sameyaa Facebook Live video a...
Sidee lacag uga sameyn karta interned-ka Haku daal...
Daawo Qaab Fudud oo aad ku format gareyn karto Mop...
Daawo:Dhibatooyinka Tahriibka iyo indho La'aanta D...
Magaceegu waa C/risaaq maxamed Rashiid waxan ahay qoraa ama Webmaster wax ku qoro Websitkaan waxan ahay arday wax ka barta Jaamacada somalia(uniso) ula jeedadedu waa sidii waxa yarka aan aqaan ugu gudbin laha Bulshada soomaliyeed
Ujeedada Ifiyahacilmiga waa sidii uu uga haqab tiri laha Bulshada somaliyeed Information Tichnlogyada iyo culuumta kala duwan ee Computerka
Ifiyahacilmiga waxa kugu diyaarsan Cashiro farabadan oo ay kamid yihiin Barashada Wordpress,HTMl,Cilidbixin Computer ,Photoshop,Adobe-audition Qormooyin iskugu jira dhaqanka iyo cashiro diini ah
Igala so xariir
Waxaad iigu so diri karta wixii Fikir Talo iyo su'aal ah Emailka ah Alaqsaa1996@gmail.com Balantenu waa kor u qaadida waxbarashada
Copyright © www.Ifiyahacilmiga.blogspot.com | Powered by Blogger